दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको बजेट हावादारीः कांग्रेस | Makalukhabar.com
दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको बजेट हावादारीः कांग्रेस
पार्वता डिसी चौधरी
जेठ २१, काठमाडौं । सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी तीन दिनदेखि बजेटमा आफ्ना धारणाहरु राखिरहेका छौँ । २०७६/०७७ बजेमाथि म आफ्नो पनि केही धारणाहरु राख्न चाहन्छु ।
यो बजेट अत्यन्त हावादारी, गफाडी र वितरणमुखी छ । यो मैँले भन्न खोजेको होइन सभामुख महोदय । हाम्रा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूले दिनुभएको डाटा बोलिरहेको छ ।
यो बजेट १५ सय ३३ अर्बको छ । विगतमा १२ सय ८ अर्बको थियो । २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हामीले देखेका छौँ । ९ सय ८१ अर्ब राजश्व उठाउने भनेका छौँ । र पुँजीगत चालु खर्च हामीले ९ सय ५७ अर्ब राखेका छौँ ।
यसले के पुष्टि हुन्छ भने हामीले जति उठाउन खोजेका छौँ, त्यति नै हामी खर्च गर्दैछौँ । अनि हामीले विकास कहाँबाट गर्ने त ? अवश्य पनि बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदान नै हो । जब हामी सबै वाह्य ऋण र आन्तरिक ऋण र अनुदानबाट विकासका योजनाहरु बनाउँछौँ भनेपछि यो वितरणमुखी योजना नभएर के हुन्छ ? यो हावादारी नभएर के हुन्छ सभामुख महोदय ?
त्यसैले सभामुख महोदय, यसले हामी नेपाली जनताले खोजेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन सपना देखेका छौँ, त्यो पुरा हुन सक्दैन ।
विगतमा पनि हामीले आन्तरिक ऋण जति उठाउन खोजेका थियौँ, सकेनौँ । वैदेशिक ऋण पनि जुन अनुपातमा हामीले उठाउन खोजेका थियौँ, त्यो पनि सकेनौँ । त्यसकारण हाम्रो खर्च गर्ने संयन्त्र पनि छैन । त्यसैले सभामुख महोदय यो बजेट जसरी ल्याउनुपर्ने थियो दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले त्यसरी आउन सकेको छैन ।
मृगौला खराब हुनबाट जोगाउन यी बानीहरु आजैबाट त्यागैं
'पाकिस्तान युद्धको लागि तयार छ'
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसाउन ३१, काठमाडौं । जम्मू कश्मीरमा अनुच्छेद ३७० खारेज गरेर नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अन्तिम गेम खेले । यसले भारतलाई युद्धतिर धकेलेको छ । भारत अब पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा केही गर्ने तयारीमा छ । यदी युद्ध नै भयो भने पनि पाकिस्तान यसका लागि तयार छ । नरेन्द्र मोदीजी को... जारी राख्नुहोस...
सेवा क्षेत्र ग्याटमा समाबेस भएको थिएन । ग्याटको उरुग्वे राउण्डको सिलसिलामा १५ अप्रिल १९९४ मा मराकस सम्झौता भई ग्याट बिश्व ब्यापार संगठन रुपान्तरण हुँदै गर्दा सेवा क्षेत्र बिश्व ब्यापार संगठनमा समेटियो । १ जनवरी १९९५ मा बिश्व ब्यापार संगठन बिबिधबत रुपमा अस्तित्वमा आउँदा सेवाले पनि बिश्व ब्यापार संगठ... जारी राख्नुहोस...
'जम्मू–कश्मीरलाई आतंकवादबाट मुक्त बनाउँछौँ'
देशले एक पारिवारिक रुपमा एक ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । एक यस्तो व्यवस्थाको हटाइएको छ, जसका कारण जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका हाम्रा भाइ बहिनी अनेक अधिकारबाट बञ्चित थिए । उनको विकासमा बाधा थियो । हाम्रो विकासबाट टाढा थियो त्यो । जुन सपना सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अ... जारी राख्नुहोस...
आजको युग आधुनिक युग हो । जहाँ संसारले दिनरात प्रगति गरी रहेको छ । त्यही समाजमा अपराधका घटनाक्रमहरुको स्वरुप फेरिदैं मात्रै छैन घटनाक्रम पनि बढ्दै गइरहेका छन् । जसमा महिला हिंसाका घटना, अपहरण र बलात्कार जस्ता घटनाहरु बढी हुने गरेका छन् । यस्ताघट्नाक्रमले न्युन हुनुको साटो बढ्दै जानु हाम्रो लागि विडम... जारी राख्नुहोस...
प्रचण्डलाई बहिर्गमित जनमुक्ती सेनाका उपाध्यक्षले दिए कडा जवाफ
सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यू, आम नेपाली आमाका छोराछोरीलाई परिवर्तनको ठुलो सपना देखाएर १० वर्षे जनयुद्धमा कपि कलम बोक्ने कलिला हातहरुमा जबरजस्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित बन्दुक बोकाएर लड्न सिकाउनु भयो । ति बालबालिकाको के दोष थियो ? लड्न लगाउनु भयो लडे । स... जारी राख्नुहोस...
‘डुबानपीडित जनता पानी कहिले सुक्ला र घर जाउँला भनेर बसेका छन्, सरकार पुगेकै छैन’
भयावह बाढी पहिरोको मैँले आफैँ गएर रौतहट जिल्ला पुरै घुमेँ । सर्लाही जिल्लामा डुबान थियो, जानै सकिएन त्यसबेला । त्यस्तै सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका केही भाग र सुनसरी जिल्ला भ्रमण गरेँ । जनताको दैनिकि नियालेँ । सम्पूर्ण जनताहरु डुबानमा थिए । घरबार बिहीन छन्, अझैपनि । खाद्यान्न समेत पानीमा परेर सडेको छ ।... जारी राख्नुहोस...
Going to UK ? Why and for what ?
Background Door opens for higher studies after plus two. On the top of that it's unquestionable to go abroad for them with good merits and financial well conditions. Nepal lacks the environment to study preferred subject with ease and this is the reason for thousands of Nepali students flying abroa... जारी राख्नुहोस...
विषादी परीक्षणबारे उद्योगमन्त्रीः भाउ बढ्यो, आफैँमाथि नाकाबन्दी जस्तै भयो
एउटा विषयले बजार गरम छ । माननीय जीहरु पनि तान्नु भएको छ । बडा खुसीको कुरा हो । नेपाली जनताको हकहितका लागि तात्नु राम्रो कुरा हो । तर कुन प्रलोभन, कुन नियतले त्यो प्रश्न कहाँबाट उठिरहेछ ? लामो समय सत्तामा बसेर केही गर्न नसकेकाहरुको अहिले अर्कै फूर्तीफार्ती देखिन्छ । हामीले त विषादी खानु हुँदैन भनेर... जारी राख्नुहोस...
‘म नेपालको भक्त हुँ, राजा बनेर देश हाँक्ने कुनै रहर थिएन’
सिंगो नेपाल राष्ट्रका निर्माणकर्ता बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशवृक्ष, प्रजातन्त्रदाता श्री ५ त्रिभुवनको पौत्र र नेपाली राष्ट्रवादका पृष्ठपोषक राजा महेन्द्रको मध्यम पुत्र एवं विकास चिन्तक राजा वीरेन्द्रका भ्राताका रुपमा हाम्रो मातृभूमि नेपालमा म पैदा भएँ । सदा शान्त, सौम्य, सुन्दर यो गौरवश... जारी राख्नुहोस...
‘विद्यार्थीले शैक्षिक मेलाबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नुहुनेछ’
इक्यान शैक्षिक मेलाले दिने सन्देश कस्तो छ ? शैक्षिक मेला भन्ने वित्तिकै शिक्षासँग जोडिएको कुरा हो । इक्यानले आयोजना गर्ने शैक्षिक मेलाले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई एकै छानामुनी विभिन्न शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीलाई भेला गराउँछ । जहाँ मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सीका दक्ष तथा अनुभवी काउन... जारी राख्नुहोस...